Fifohazam-panahy lehibe - Wikipedia
Ny fifohazam-panahy lehibe (izay atao amin' ny teny anglisy hoe: Great Awakening) dia fifohazana ara-pivavahana niseho tao amin' ny Fanjakan' i Britaina Lehibe sy tao amin' ireo zanataniny tany Amerika teo antenatenan' ny taonjato faha-18. Tamin' ny taona 1842 no nisehan' io teny hoe Great Awakening io. Hita koa tao amin' ny lohatenin' ny asasoratra natokan' i Joseph Tracy ho an' ny fanavaozana indray ny fivavahana izay nanomboka tao Britaina Lehibe sy tao amin' ireo zanataniny tany Amerika tamin' ireo taona 1720, izay nandroso fatratra tamin' ireo taona 1740 ka tsy nihena hery raha tsy tamin' ireo taona 1760 na 1770 akory aza. Maro ireo andiam-pifohazam-panahy nanaraka izany, dia ny fifohazam-panahy lehibe faharoa (1790-1840) sy ny fifohazam-panahy lehibe fahatelo teo anelanelan' ny taona 1855 sy ireo taompolo voalohandohany amin' ny taonjato faha-20. Ireo fifohazam-panahy ireo, tao amin' ny prôtestantisma, indrindra fa tany Amerika dia vanim-potoana nanomezana hery vaovao indray ny fiainanana ara-pivavahana. Ny fifohazam-panahy lehibe dia nahatratra koa ireo fiangonana prôtestanta sy fiangonana ara-piazantsara sady nandray anjara tamin' ny fiforonan' ny fiagonana vaovao.
1 Fifohazam-panahy lehibe voalohany
2 Fifohazam-panahy lehibe faharoa
3 Fifohazam-panahy lehibe fahatelo
Fifohazam-panahy lehibe voalohany[hanova | hanova ny fango]
Ny fifohazam-panahy lehibe voalohany na fifohazam-panahy ara-pilazantsara na fifohazam-panahy evanjelika dia ireo fifohazam-panahy kristiana izay niseho tao Britaina Lehibe sy tao amin' ireo zanataniny tao Amerika Avaratra tamin' ireo taona 1730 sy 1740. Atao hoe First Great Awakening (na indraindray Great Awakening) na Evangelical Revival izany amin' ny teny anglisy. Ny fihetsiketsehan' ny fifohazam-panahy dia nisy fiantraikany tamin' ny prôtestantisma raha niezaka ny hanavao ny fitiavam-bavaka sy ny fanoloran-tena ara-pivavahana ny mpino ao aminy. Ny fifohazam-panahy lehibe dia nanamarika ny fisandratan' ny evanjelisma anglô-amerikana izay niseho ho fikambanana ara-pivavahana mampiray fireham-piangonana isan-karazany tao amin' ireo fiangonana prôtestanta. Ny teny hoe Great Awakening no fampiasa matetika ao Etazonia fa ny hoe Evangelical Revival kosa no ampiasaina ao amin' ny Fanjakana Mitambatra. Ireo mpitarika malaza ny fifohazam-panahy, izay nanohana izany amin' ny alalan' ireo firehana tranainy -- toy ny poritanisma sy ny pietisma ary ny presbiterianisma, toa an' i George Whitefield sy i John Wesley ary i Jonathan Edwards -- dia nampifandray ny teôlôjian' ny fifohazam-panahy sy ny famonjena izay mihoatra ny efitrefitry ny antokom-piangonana sady nanampy tamin' ny fanefena izay maha ara-pilazantsara iraisana.
Fifohazam-panahy lehibe faharoa[hanova | hanova ny fango]
Ny fifohazam-panahy lehibe faharoa dia fifohazam-panahy prôtestanta niseho tamin' ny taonjaro faha-19 tao Etazonia. Ny fifohazam-panahy lehibe faharoa, izay nampiely ny fivavahana tamin' ny alalan' ny toriteny mamohafoha sy mampihetsi-po, dia niteraka fihetsiketseham-panavaozana maro. Io fifohazam-panahy io dia singa manan-danja indrindra teo amin' ireo fihetsiketsehana ireo sady nahasarika mpiova finoana an-jatony maro ho amin' ny antokom-pinoana prôtestanta vaovao. Ny fiangonana metôdista dia nampiasa mpitodra fivavahana mitaingin-tsoavaly (anglisy: circuit riders) mitety tanàna mba ho afaka mitory amin' ireo olona any amin' ny faritra an-tsisin-tany. Nitarika ho amin' ny vanim-potoan' ny fanitsiana (fanavaozana) ara-piarahamonina talohan' ny ady sady nanantitra ny famonjena amin' ny alalan' ny institosiona izany. Ny fitobaky ny hafanam-po ara-pivavahana sy ny fifohazam-panahy dia nanomboka tao Kentucky sy tao Tennessee tamin' ireo taona 1790 sy tamin' ny fiandohan' ireo taona 1800 tao amin' ireo Presbiteriana sy Metôdista ary Batista. Ny fifohazam-panahy dia nitondra fampaherezana manoloana ny tsy fahafantarana marina ny halehan' ny fiainana vokatr' ireo fiovana ara-piarahamonina sy ara-pôlitika tany Amerika.
Fifohazam-panahy lehibe fahatelo[hanova | hanova ny fango]
Ny fifohazam-panahy lehibe fahatelo dia vanimpotoana ara-tantara izay voamariky ny fihetsiketsehana lehibe ara-pivavahana tao Etazonia, izay namboka tamin' ireo taona 1850 ka hatramin' ireo taompolo voalohany tamin' ny taonjato faha-20. Nisy fiantraikany tamin' ireo antokom-piangonana prôtestanta pietista izany sady niteraka koa fihetsehetseham-pitakiana ara-piarahamonina izay namporisihin' ny finoana fa ny fiavian' i Kristy fanindroany dia hiseho aorian' ny fanavaozan' ny zanak' olombelona ny tany manontolo. Nisy fifandraisany amin' ny fihetsiketsehan' ny Filazantsara ara-piarahamonina (na fihetsiketseha' ny Evanjely sôsialy) izany, izay nampihatra ny kristianisma amin' ny resaka fiarahamonina (sôsialy) sady nandray ny heriny avy amin' ny fifohazam-panahy lehibe, sahala amin' ny fihetsihetsehana misiônera prôtestanta maneran-tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fifohazam-panahy_lehibe&oldid=1012695"
Voaova farany tamin'ny 13 Jolay 2021 amin'ny 07:32 ity pejy ity.